Weerar askar lagu dilay oo ka dhacay duleedka Mandheera – GEELLE MAG
Cali Axmed Posted On September 11, 2019
Wararka laga helayo Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa waxaa ay sheegayaan in Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay duleedka Magaaladaas ku weerareen Kolonyo ay la socdeen Ciidamada Kenya.
Ciidamada la weeraray ayaa ka yimid dhinaca deegaanka Ceelraam oo hoostaga Magaalada Mandheera,iyaga oo sida la sheegay kusii jeeday degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo,halkaas oo ay ku sugan yihiin Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya kana mid ah howlgalka AMISOM.
Weerarka oo ka dhacay Shalay gelinkii dambe ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana Saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya ay Warbaahinta u sheegeen in ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo mas’uuliyadda weerarkaas sheegatay ayaa waxaa Warar ay ku daabaceen Baraha internet-ka ay ku sheegeen in ay weerarkaasi ku dileen 9 Askari oo Kenyan ah sidoo kalena uga gubeen ilaa Afar Gaari wallow warar madax banana oo xaqiijinaya aysan jirin.
Saraakiisha Ciidamada Kenya ee ku sugan Gobolka Waqooyi Bari ama Gobolka Gedo dhankooda weli kama hadlin weerarka jidgal ah ee lagu qaado Gaadiid ay la socdeen Ciidamadooda,xilli ay marayeen duleedka Magalada Mandheera.
Inta badan deegaano ka tirsan Gobolka Waqoioyi Bari ee dalka Kenya iyo Gobolada Jubbooyinka iyo gedo ayaa waxaa ka dhaca weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah,kuwaas oo lala beegsado Ciidamada Kenya, waxaana mas’uuliyadooda sheegta Ururka Al-Shabaab.
Halka uu marayo Shirka dib u heshiisiinta Galmudug